तपाईं हाँस्न भुल्नु भयो कि ? - Pradesh Today तपाईं हाँस्न भुल्नु भयो कि ? - Pradesh Today
तपाईं हाँस्न भुल्नु भयो कि ?
पुष २६, २०७६ श्रीराम दहित
खुलेर हाँस्नु जीवनको लागि अनुपम उपहार मानिन्छ तर यो उपहार अधिकांश घरपरिवारमा हराउँदै गएको देखिन्छ । जबसम्म हामी बालावस्थामा रहन्छौं, हाँसो खुसी अनुहारमा रहिरहन्छ ।
तर जसरी किशोर, युवा, प्रौढ र जिम्मेवारी उमेर बढ्दै जाँदा क्रमशः हाँसो जीवनबाट टाढिदै जाने गर्दछ । दैनिक जीवनमा तनाव आउनुको कारण जीवनबाट हाँसो हराउँदै जानु हो । के हामी जीवन कहिले हाँस्ने गथ्र्यौ त ?
हाँस्ने अवस्थाको बाटो बन्द हुँदा हामी हाँस्न बिर्सीसक्यौं । बालावस्थामा रहेको जुन झैँ चम्किलो अनुहार हाँसो हराए जस्तै गरी हरायो । हाँसोसँग निस्वार्थता, स्वतन्त्रता, कोमलता, सरलता, संवेदनशीलता, हार्दिकता सम्बन्ध राख्दछ । जहाँ यी शब्दको विपरीत शब्द प्रयोग जस्तै असहमत, स्वार्थ, चिन्ता, भय, तनाव हुन्छन् त्यहाँ हाँसो हराउँदै जान्छ ।
हाँसो एक शारीरिक क्रिया हुँदो हो अथवा ओठ खुल्नु र घाँटीबाट केही स्वर निष्कासन हुनु हो भने कृत्रिम हाँसोले पनि शारीरिक र आत्मिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नुपर्छ भन्ने वैज्ञानिकहरुको निष्कर्ष रहेको छ । हाँसो कोमलता र कठोरताजस्तो विपरीत अवस्थासँग सम्बन्ध राख्ने कुरा विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ । भाव समवेदनासँग हाँसोको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ । व्यक्तिमा आज भाव समवेदना हराउँदै जाँदा कृत्रिम हाँसोको सहारा लिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
सक्कली हाँसो आउनु भनेको समग्र शान्तिको अवस्था हो । जब मानिसले अरुप्रति कुदृष्टी राख्ने गर्छ उसले प्राप्ति पनि सोही अनुसारको गर्छ । हाँसो मानिसको उमंग उल्लास हो । हाँसो हृदयको आन्तरिक आवाज हो ।
हामीमा क्रोध, प्रतिशोध, चिन्ता, निर्भयता, तनाव जब हराउने गर्छ तब हामीमा आन्तरिक प्राकृतिक हाँसो उत्पन्न हुनेगर्छ । मानव जीवनको आरम्भदेखि हालसम्म कसरी सुखी राख्ने ? भन्ने प्रयत्न रहेको देखिन्छ ।
जसरी आरम्भमा मानिस सन्तोषजनक संवेदनशील, निर्भय, चिन्तारहित जीवन जिउँदा अनायास हाँसो प्राप्त गर्दथ्यो आज बाटो बिराउँदा हाँस्न भुलेको छ ।
यदि व्यक्ति सधैं सुखी, खुशी र हँसिलो चम्किलो निरोगी भई बाँच्न चाहना गर्छ भने भौतिक आवश्यकताको उपभोगमा न्यूनीकरण, परिस्थितिसँग तालमेल, सहअस्थित्वको सिर्जना,
विजय पराजयको भेदबाट मुक्त हुँदै जानुपर्ने हुन्छ र प्राप्त हुन्छ सक्कली हृदयपूर्ण हाँसो । जीवनलाई उत्सवमय बनाउन अनायास हाँसो निकाल्न चाहना छ भने सात्विक जीवनशैली,
नित्य नियमित ध्यान, गायत्री मन्त्र जप, योग, व्यायाम, कमशील, संस्कृतिप्रेमी भइ जीवन जिउनु पर्छ । र हामीबाट हाँसो हराउने छैन ।
तुलसीपुरमा बजार अनुगमन
पढेकै विद्यालयमा जिम्मेवारी
पुष ०२, २०७५
सामुदायिक विद्यालयमा कमजोर पठनसीप
बढ्दै कोरोना संक्रमण